Notes Archives - My Notes
January 6, 2020 by Thein Htike Aung on Notes
“ကိုယ်တိုင်သိရှိသွားမှု” လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဇဏ်ခီရဲ့ စာအုပ်မှာ ဆောင်းပါးတို ၁၈ ပုဒ် စုစည်းထားတယ်။ တချို့ ဆောင်းပါးတွေက သူ့ Facebook မှာ ရေးဖူးတဲ့ အပုဒ်တွေ ပါတယ်။
စာအုပ်တစ်ဝက်ကျော်လောက်က စာရေးသူ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ့် လက်တွေ့ဘ၀ ရယ် ခေတ်အမြင်နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဗုဒ္ဓ ဘာသာတရားအပေါ် သက်ဝင်ယုံကြည်လာတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြထားတယ်။
ကျန်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ဆင်ဆာ အကြောင်း၊ စာရေးသူ အဖေ အကြောင်း၊ လူမျိုးစုတွေ အကြောင်းနဲ့ စာရေးသူရဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ရေးထားတယ်။
ဆောင်းပါးတိုတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖတ်လို့ရသည့်တိုင် တွေးစရာတွေများစေမယ့် စာအုပ်ဖြစ်တယ်။
November 25, 2019 by Thein Htike Aung on Notes, Problem
Lesson learnt from Gaming PC setup
TL;DR – Gaming PC ဆင်မယ်ဆို ကွကိုယ်ဆင်တာထက် ဆင်ပြီးသား မှာလိုက်တာ ပိုကိုက်တယ်။ တခါတည်း ၃ နှစ် ၄နှစ် သုံးလို့ရအောင် အမြင့်ဆုံး မဟုတ်တောင် အမြင့်ဆုံးအောက်သာ ဝယ်ထားလိုက်။ Apple Macbook လို။ လဲပြီဆို အကုန်လဲပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ကျော်က PC ဝယ်တယ် ဂိမ်းဆော့မယ်ဆိုပြီး Aftershock က။ 24 လက်မ Monitor နဲ့ GTX 1060 3GB နဲ့။ ခု ကိုယ်က ဟိုလဲ ဒီလဲ လုပ်တော့ အသစ်ဝယ်ရသလို ဖြစ်နေတယ်။ ပထမ ၂၇ လက်မ Monitor ဝယ်တယ် ရှည်ပြီး။ နောက်တော့ သိရတာက 1440 resolution ဖြစ်သွားတယ့် အတွက် Graphic card က သိပ်များရင် မနိုင်တော့ဘူး။ Modern Warfare ဆို Online Game ဆော့လို့ မရဘူး။
အဲ့တာနဲ့ RTX 2070 ပြောင်းဝယ်တယ်။ အမှန်က Palit RTX 2070 Super JetStream Serie ကို ကိုယ်က 2070 Super ထင်ပြီး ဝယ်လိုက်တာ။ ထားတော့ ဒါက Branding လှဲ့ကွက်နဲ့ ကိုယ်ညံ့လို့ ခံလိုက်ရတယ်။ PSU အသစ် ထပ်ဝယ်ရတယ်။ PSU ပြောင်းတော့ ကိုယ်လဲ အဲ့လိုက် နှဲ့နှဲ့စပ်စပ် Hardware မလုပ်ဖူးတော့ စိတ်ပင်ပန်းရသေးတယ်။ ဒါတောင် အေးချမ်းက Motherboard နဲ့ CPU power တပ်နည်း Youtube ရှာပေးလို့ ရသွားတာ။ GPU slot က ၂ကွက် ယူသွားလို့ Wifi card ဖြုတ်ရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ Usb wifi adpater ထပ်ဝယ်ရတယ်။ ဆင်ရင်းနဲ့ ပန်ကာကြိုး ပြတ်သွားတယ်။ အဲ့တာနဲ့ မပြီးသေးဘူး။ RTX 2070 ကို Detect သိဖို့ Window 10 latest version သွင်းဖို့လိုမှန်း ၁ ရက်လောက်နေမှ နားလည်တယ်။ အဲ့တာက ဒီတိုင်း normal window update လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ Assistant Wizard နဲ့ လုပ်ရတာ။ ကိုလဲ Window မသုံးတာ ကြတော့ အော်အဲ့လိုကို ဆိုပြီး ဖြစ်ရတယ်။
အကောင်းဘက်က ဆိုရင်တော့ PC ကွကိုယ် ဆင်တတ်သွားတာပေါ့။ ဒါပင်မယ့် ဂိမ်းဆော့ချိန် နည်းသွားတယ်။ LOL xD
Facebook ကြော်ငြာက တတ်တဲ့ PC ဆင်တဲ့ Service တွေမှာ ဈေးကြည့်ကြည့်တော့ လက်ခက မယူသလိုက်ပဲ။ Parts တွေက Market Price ဈေးတွေပဲ။ လျော့တောင် လျော့သေးတယ်။ ပြီးရင် သူတို့က Pro ဆိုတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လုပ်နိုင်တယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် Gaming PC ဆင်မယ်ဆို ကွကိုယ်ဆင်တာထက် ဆင်ပြီးသား မှာလိုက်တာ ပိုကိုက်တယ်။ တခါတည်း ၃ နှစ် ၄နှစ် သုံးလို့ရအောင် အမြင့်ဆုံး မဟုတ်တောင် အမြင့်ဆုံးအောက်သာ ဝယ်ထားလိုက်။ Apple Macbook လို။ လဲပြီဆို အကုန်လဲပဲ။
November 12, 2019 by Thein Htike Aung on Notes
21 Lessons for the 21st Century က အတွေးခေါ်လေးတွေ မှတ်မိတာလေးတွေ ရှယ်လုပ်တာပါ
စာရေးသူက 2050 ရောက်ရင် ကမ္ဘာဟာ ဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲ။ လွတ်လပ်ရေး သမားတွေ၊ မျိုးချစ်တွေ၊ ဘာသာရေးတွေက ဘယ်လို ကမ္ဘာကို တည်ဆောက်ကျမှာလဲ။ ဒါတွေမက နည်းပညာ AI, Big Data Algorithms တွေက ကမ္ဘာကို အဲ့ချိန်ကျရင် ထိန်းချုပ်နေပြီလား ဆိုပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ကာလက ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေ၊ ကမ္ဘာစစ်တွေ၊ ဘာသာရေးကြောင့် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲတွေ၊ အုပ်ချုပ်ရေး ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ Facebook က လွမ်းမိုးမှုတွေ ဒါတွေကို ခြုံကြည့်ပြီး 2050 ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လူသားတွေ အတိတ်ကို သင်ခန်းစာ ယူပြီး တည်ဆောင်နိုင်အောင် ဆောင်းပါး ၂၁ ပုဒ်နဲ့ ဆွေးနွေးထားတာပါ။
၁။ တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ် ဆိုပြီး လက်ဆုပ်လက်ကိုင်လဲ သက်သေပြလို့ မရတဲ့ ပုံပြင်တွေအပေါ မသာယာပါနဲ့
ရှေးတုန်းက လူတွေက Survival ဖြစ်ဖို့အတွက် ပုံပြင်တွေကို ဖန်တီးကြတယ်။ ဥပမာ၊ ငါတို့ နိင်ငံဟာ God နေတဲ့ နေရာ။ ဒါကြောင့်မို အသက်ပေး ကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီး မြှောက်ပေးကြတယ်။ တနည်းအားဖြစ် God အကြောင်းပြပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်ချင်တာ ကိုယ်လုပ်ကြတယ်
၂။ 2050 ကြရင် လူတိုင်း အလုပ်ရှိချင်မှ ရှိမယ်။ Technology မြင့်သွားတော့ လူတစ်ယောက်နဲ့ အများကြီး လုပ်နိုင်သွားတယ်။ ဒါဆို အောက်ခြေက လူတွေ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲသွားနိုင်တယ်။ခု McDonald မှာ Cashier တွေ အစား စက်ပြောင်းထားပြီး လူတွေက Kitchen မှာ ပြောင်းလုပ်သလိုမျိုး။ Cashier ကနေ မီးဖိုချောင်မှာ ကူဖို့က Training 10 ရက် လောက်နဲ့ ရပေမယ့် 2050 တော့ ဆိုပါတော့ Scientist လိုတယ်ဆိုရင် Carrier Gap ကြီးတော့ လူတွေက ၄ ၅ နှစ် အချိန်ပေး သင်ပေးဖို့ အစိုးရက စီစဉ်ပေးသင့်တယ်။
၃။ Social Network လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အမျိုးသားရေး ပြသာနာက ကမ္ဘာပြသနာ ဖြစ်လာတယ်။ မြန်မာမှာ Facebook ကြောင့် ဘာသာရေး မုန်းတီးမှု၊ အကြမ်းဖတ်မှု ဖြစ်တယ်။ Facebook က ဖြစ်ပါစေ ဆိုပြီး လုပ်တာလဲ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဘာသာ တခြား နိုင်းငံလိုပဲ ပေးသုံးတာပဲ။ အဲ့လိုဆိုတော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ ပြသာနာ မဟုတ်ဘဲ Facebook က အစိုးရလို တကမ္ဘာလုံးအတွက် တာဝန်ရှိလာတယ်။
၄။ ကိုယ့်ဘာသာကို တော်တော်နှံစပ်တယ်လို့ ခုခေတ်မှာ လူတွေက ထင်ကြတယ်။ ကျောက်ခေတ်က လူတစ်ယောက်က တော်တော် နှံစပ်ရတယ် အသက်ရှင်ဖို့ အတွက်၊ အမဲလိုက်တတ်ရတယ်၊ မီးဖိုတတ်ရတယ်၊ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပုတ်သတ်တတ်ရတယ်။ ခုခေတ်မှာ အစားစာဆိုရင် Shopping Center ကဝယ်တယ်။ Pro တယောက်က သတ်ဖြတ်ထားပြီး စနစ်တကျ ထုပ်ပိုးထားတာ တွေကို ဝယ်တယ်။ တကယ်တည်း ဒီ အသားက ဘယ်ကလာလဲ။ အဲ့လိုဆိုရင် သိသလိုလိုနဲ့ မသိကျဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကို တော်တော်နှံစပ်တယ်လို့ ထင်တယ့်် စိတ်က Management level ကြရင် ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မှားသွားနိုင်တယ်။
၅။ ။ တရားထိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ တရားထိုင်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲ စိတ်ကို နားလည်အောင်၊ ဘယ်အရာမှ မပိုင်ကြောင်း မြင်လာလိမ့်မယ်။ လူတွေက သေပြီး ဘာဖြစ်မလဲ မေးကြတယ်၊ အဲ့လိုအမေးဟာ သေရင် ငါဆိုတဲ့စိတ်ရှိအုံးမယ်လို့ သတ်မှတ်ထားလို့ပဲ။ ကိုယ့်စိတ်အကြောင်းကို ကိုယ်နားလည်ရင် နေ့စဉ်ဒူ၀ ဒုက္ခတွေကိုလဲ ရန်ဆိုင်နိုင်လာလိမ့်မယ် ဆိုပြီး နိဂုံးချုပ်ထားတယ်။
ဒါက အကြမ်းဖြင်းပါ အသေးစိတ်ကို စာအုပ်မှာ ဖတ်ကြည့်သင့်ပါကြောင်း
March 28, 2019 by Thein Htike Aung on Notes
Initially, I thought, EZ-LINK app only can use to see public transport and top up transactions and that’s it. In the last two months, my colleagues told me about following efficient tips.
Circle.life user can get Bonus data, 50MB data for every 10 rides taken per week
You can enable auto top up your ez-link card if balance is low (It’s called EZ-RELOAD)
So, why not just giveatry by installing in your iOS or Android phones 😀
September 17, 2018 by Thein Htike Aung on Notes
Following is how to transfer DBS or POSB to Ayer Bank.
Thanks for sharing, Pote Gyi.
“Mingalarpar! You can transfer money to AYA Bank Account in Myanmar from Singapore by using DBS/POSB bill payment service. Please find attached file for detail steps. After each successful transaction, AYA Bank will credit to the receiver’s account on the next banking day (working day) with the SGDMMK exchange rate (buying rate) of that settlement date. For Bill Payment transaction, we will collect MMK3000/- per transaction regardless of the amount transfer till 31st Mar,2016. Start from 1st April, 2016, AYA Bank will credit to the receiver’s account on the next banking day (working day) with the SGDMMK exchange rate (buying rate) of that transferring date and service charges will be MMK5000/-. Please note that you can make transaction from minimum SGD100 to maximum SGD5000 per transaction. Thank you.”